Public Health in Myanmar: November 2010
AIDS themes (အေ-အိုင်-ဒီ-အက်စ်) ဆောင်ပုဒ်များ
(အေ-အိုင်-ဒီ-အက်စ်) ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ပုဒ် AIDS themes တွေ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကတည်းက ရှိနေခဲ့တယ်။ World AIDS Day နေ့အတွက်သာ သုံးရမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဆောင်ပုဒ်တွေကို ၁ နှစ် ၂ နှစ် သုံးနိုင်ကြတယ်။ ဥပမာ Campaigning slogans တွေဖြစ်တဲ့ Stop AIDS - Keep the Promise ဆိုတာကို အစိုးရတွေ သူတို့ပေးထားတဲ့ ကတိ တည်အောင် တနှစ်ပတ်လုံး သုံးကြရတယ်။ G8 အစည်းအဝေးတွေအထိ ရောက်တယ်။
စကတည်းကနေ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ UNAIDS က သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး World AIDS Day campaign အတွက် တနှစ်တာဆောင်ပုဒ် Annual themes တခုစီ ရွေးချယ်ပေးတာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ ဖြစ်တယ်။ ၂၀၀၈ ကြတော့ World AIDS Campaign's Global Steering Committee ကနေ World AIDS Day theme တနှစ်တွက် တခု ရွေးပေးလာတယ်။
၂၀၀၅ ကနေ ၂၀၁၀ အတွက် Stop AIDS. Keep the Promise ဆိုတာ ရွေးထားတယ်။ တနှစ်တာအတွက် Sub-theme ဆောင်ပုဒ်ငယ်တခု ရှိသေးပြန်တယ်။
၁၉၈၈ ကတည်းကနေ သုံးခဲ့တဲ့ ဆောင်ပုဒ်တွေက -
1988 = Communication
1989 = Youth
1990 = Women and AIDS
1991 = Sharing the Challenge
1992 = Community Commitment
1993 = Act
1994 = AIDS and the Family
1995 = Shared Rights, Shared Responsibilities
1996 = One World. One Hope
1997 = Children Living inaWorld with AIDS
1998 = Force for Change: World AIDS Campaign with Young People
1999 = Listen, Learn, Live: World AIDS Campaign with Children & Young People
2000 = AIDS: Men MakeaDifference
2001 = I care. Do you?
2002 = Stigma and Discrimination
2003 = Stigma and Discrimination
2004 = Women, Girls, HIV and AIDS
2005 = Stop AIDS. Keep the Promise
2006 = Stop AIDS. Keep the Promise – Accountability
2007 = Stop AIDS. Keep the Promise - Leadership
2008 = Stop AIDS. Keep the Promise - Lead - Empower - Deliver
2009 = Universal Access and Human Rights
2010 = Act Aware
2010 = Universal Access and Human Rights ဖြစ်တယ်။
၂၀၁၀ အတွက် ၂ မျိုး ၃ မျိုး သုံးတာ တွေ့နေရတယ်။ ဘာ့လို့လဲ မသိဘူး။ “လူ့အခွင့်အရေး” ဆိုတာ မကြိုက်တဲ့ အစိုးရ မျိုးတွေ ရှိလို့လား မပြောတတ်ဘူး။ အဲလို အစိုးရမျိုးနဲ့ နေရတဲ့ ဝေဒနာသည်တွေ “နူရာ-၀ဲစွဲ၊ လဲရာ-သူခိုးထောင်း” ဆိုသလို၊ “ကုမရသေးတဲ့ ရောဂါ ၀င်ပါတယ်ဆိုမှ အစိုးရက ထောင်းတာပါ ခံနေကြရတယ်။”
"သူခိုးနဲ့ တူသော အစိုးရဘေးက ဝေးကြပါစေ။"
Labels: Health Awareness,့ health education
• ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာ ၁ ရက်နေ့ကတည်းက AIDS ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်
o တလွဲ အယူအဆတွေကို ပယ်ဖျက်ဘို့ နဲ့
o အသိပညာ တိုးတက်စေရေးတို့အတွက် သတ်မှတ် ကျင်းပနေခဲ့တယ်။
• HIV ဆိုတာ ပျောက်မသွားသေးဘူး။ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ကျန်နေသေးတယ် ဆိုတာကို လူအများကို သိစေအောင် လုပ်ရလို့ ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့က အရေးကြီးတယ်။
• UNAIDS ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ ကလေး ၂့၅ သန်း အပါအ၀င် လူပေါင်း ၃၃့၃ သန်းမှာ HIV ပိုး ရှိနေကြတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုံးက လူနာသစ် ၂့၆ သန်းထပ်ရှိခဲ့ပြီး၊ ၁့၈ သန်း ဒီရောဂါကြောင့် သေဆုံးခဲ့ကြရတယ်။
• ဒီရောဂါ ဖြစ်သူထဲက တကယ့် အများစုကြီးဟာ ၀င်ငွေနည်း၊ ၀င်ငွေ အလယ်အလတ်သာရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တွေက ဖြစ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ HIV ဟာ နိုင်ငံတိုင်းက ယောက်ျား-မိန်းမ-ကလေး အားလုံးကို ခြိမ်းခြောက် နေတာပါ။
• World AIDS Day theme ကတော့ Universal Access and Human Rights “အားလုံး လက်လမ်းမီရေး နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး” ဆိုတာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ် ဖြစ်တယ်။
• ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေက HIV/AIDS ကုသရေး၊ ကာကွယ်ရေး ဆိုတာ “လူ့အခွင့်အရေး” အဖြစ် လက်ခံကြပြီး၊ HIV/AIDS နဲ့ ဆိုင်တာတွေကို လက်လှမ်းမီဘို့ တန်ဘိုးရှိတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့၊ လုပ်စရာတွေ တလှေကြီး ကျန်နေသေးတယ်။ ၀င်ငွေနည်း နဲ့ ၀င်ငွေအလတ်စားရှိ တိုင်းပြည်တွေမှာ ဒီရောဂါဆေး ARV ကို လူဦးရေ တ၀က်တောင်မှ မရနိုင်ကြသေးဘူး။ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း လူသန်းများစွာ ကူးစက်ခံနေရဆဲ ဖြစ်လို့ပါ။
• HIV/AIDS ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ဘို့ “လူ့အခွင့်အရေး” ဟာ အခြေခံကျတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက် ခံရတာဟာ HIV ပြန့်နှံ့အောင် အားပေးတာဘဲ။ အပယ်ခံတွေ ဥပမာ မူးယစ်ဆေး ထိုးသူတွေနဲ့ လိင်နဲ့ အသက် မွေးရသူတွေကို အန္တရာယ်ပိုပြီး ကျရောက်စေတယ်။ လူတဦးချင်းရဲ့ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးရင် HIV ရှိပေမဲ့ ခွဲခြားခံရမှု ကင်းကင်းနဲ့ အသက်ရှင် နေနိုင်စေမယ်။
• တယောက်ချင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန်မြူနတီလိုက်ဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ဖြစ်၊ HIV/AIDS ရောဂါ ကာကွယ်၊ စောင့်ရှောက်၊ ကုသရေးမှာ တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက် ပြည့်မီဘို့အတွက် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ပေးဘို့ World AIDS Day ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့ဟာ အခွင့်အလမ်းတခု ဖြစ်တယ်။
• သင် ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။ အနီရောင် ဖဲပြားလေး ၀တ်ထားပြီး အသိပညာဖြန့်ပေးပါ။
• အနီရောင် ဖဲပြားလေးဟာ နိုင်ငံတကာ AIDS ရောဂါ အသိကြွယ်စေဘို့ စာနာစိတ်နဲ့ လူတိုင်း ၀တ်ဆင်ကြတဲ့ အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတ ဖြစ်တယ်။ သူများတွေကိုလဲ HIV ကို စိုးရိမ်စေဘ်ို့၊ ကူညီကြဘို့၊ ပါဝင်လာကြဘို့ တိုက်တွန်းရာ ကြစေတယ်။
• အနီရောင် ဖဲပြားလေးကို ဘယ်သူကမဆို အလွယ်တကူ ကိုယ်တိုင် လုပ်ပါ။ တရားဝင် ပြုလုပ်သူဆိုတာ မရှိပါ။
• တကယ်လို့ ဒိထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် နီးစပ်ရာ အစီအစဉ်တွေမှာ ပါဝင်ပါ။ တကမ္ဘာလုံးမှာ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ တီထွင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
HIV/AIDS ဟာ ကပ်ရောဂါ
HIV ပိုးကို ၁၉၈၁ ခုနှစ်က စတွေ့ခဲ့ပြီး၊ HIV/AIDS ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ခြိမ်းခြောက် အန္တရာယ် ပြုနေဆဲ ကပ်ရောဂါ Pandemic diseases တွေထဲက တစ်မျိုး ဖြစ်တယ်။ HIV ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ Retroviridae အုပ်စုဝင် ဖြစ်ပြီး HIV-1 နဲ့ HIV-2 ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်။ HIV-1 ဟာ ပိုမို ပြင်းထန်တယ်၊ ကူးစက်လွယ်တယ်။ ကူးစက်ခံရရင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ခုခံမှုစနစ် Immune System မှာရှိတဲ့ CD4 Cell (Helper T Cells) ကို အဓိက ကူးစက် ဖျက်ဆီးတယ်။ ကူးစက်ခံရတဲ့ CD4 Cell တွေကို CD8 Cell တွေက ရန်သူပိုးမွှားလို့ ထင်မှတ်ပြီး မှားယွင်း တိုက်ခိုက်လို့ CD4 Cell တွေ လျော့နည်းစေတယ်။ ကျန်းမာတဲ့လူမှာ CD4 Cell အရေအတွက် 1200 cells/μl ရှိတယ်။
HIV (Human Immunodeficiency Virus) ဆိုတာ လူ့ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို ကျဆင်းစေတဲ့ Virus ပိုး ဖြစ်တယ်။
AIDS ဆိုတာ ဘာလဲ
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ခုခံအား ကျဆင်းမှုရောဂါ ဆိုတာ HIV ပိုး ကူးစက်ခံရလို့ ရလာရတဲ့ “ရောဂါလက္ခဏာ အစုအပေါင်း” ဖြစ်တယ်။ လက္ခဏာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိဘူး။ Opportunistic infections အခွင့်သာလို့ ၀င်လာတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့် အသက် အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်ရတဲ့အထိ ဖြစ်စေတယ်။
ဘယ်တော့ AIDS ဖြစ်လာသလဲ
HIV ပိုးဝင်ပြီးနောက် ဆေးမကုသူတွေမှာ ၈-၁၀ နှစ်ကြာမှ AIDS ဖြစ်လာတယ်။
HIV ကူးစက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများ
1. ပိုးရှိသူ နှင့် လိင်တူ-လိင်ကွဲ ဆက်ဆံခြင်း၊ လူနာ ၉၀% က လိင်ဆက်ဆံရာက ကူးတယ်။ ၆၀-၇၀% က လိင်တူဆက်ဆံလို့ ကူးတယ်။
2. ပိုးပါတဲ့ သွေးသွင်းခြင်း (၉၀% ကျော် ကူးနိုင်စွမ်းရှိတယ်)၊ ပိုးရှိသူနဲ့ ဆေးထိုးအပ် ဆေးထိုးပြွန် မျှဝေသုံးစွဲခြင်း၊ တကတူး ဆေးမင်ကြောင် ထိုးခြင်း၊ ဓါတ်အပ် စိုက်ခြင်း၊ ကွင်းတွေတပ်ဆင် အလှပြင်ခြင်း၊
3. ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်က ကလေးကို ကူးစက်ခြင်း (၁၅-၃၀%) တို့ ဖြစ်တယ်။
Stage I ဘာ ရောဂါလက္ခဏာမှ မရှိသေးတာ။
Stage II သာမန်အရေပြား၊ အရေပြားနု၊ အသက်ရှူလမ်း အပေါ်ပိုင်းတွေမှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ရှိလာတာ။
Stage III ၀မ်းခဏခဏ၊ အကြာကြီး (၁ လ) လျှောတာ၊ ဆိုးဝါးတဲ့ ဗက်တီးရီးယားပိုးဝင်တာ၊ နူမိုးနီးယား၊ အဆုပ်တီဘီ ဖြစ်လာတာ။
Stage IV ဦးနှောက်မှာ Toxoplasmosis ရောဂါ၊ အစာမြိုပြွန်-လေပြွန်-အဆုပ်မှာ Candidiasis မှိုရောဂါ၊ Kaposi's Sarcoma ရောဂါ ၀င်လာတာ။ ဒီလိုရောဂါတွေက လူကောင်းတွေဆိုရင် ကုသရတာလွယ်တယ်။ CD4 positive T cell count အရေအတွက်က 200 per mm3 of blood ထက်နည်းမယ်။ WHO ကနေ Antiretroviral (ARV) therapy ဆေးကုဘို့ ညွှန်းတယ်။
• HIV ကို လုံးဝ ပျောက်ကင်း စေနိုင်တဲ့ ဆေးဝါး ယခုအချိန်ထိ မပေါ်သေးပါ။
• ဗိုင်းရပ်စ် ပေါက်ပွားတာကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး၊ CD4 Cell အရေအတွက် ဆက်မလျော့ ကျစေလို့ ရောဂါ ရှေ့ဆက် တိုးမှာကို ဟန့်တားပေးတဲ့ ဆေးတွေသာ ရှိတယ်။
• HIV ပိုးကြောင့် ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေဘို့၊
• ရောဂါပိုး အရေအတွက်ကို လျှော့ချပေးဘို့၊
• လူနာရဲ့ သက်တမ်းကို ဆွဲဆန့်ပေးဘို့၊
• လူနာရဲ့ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေပြီး အလုပ် ပြန်လုပ်နိုင်စေဘို့သာ ဖြစ်တယ်။
HIV ကူးစက်မှု ရှိ-မရှိ၊ အကောင်း-အဆိုး စစ်ဆေးခြင်း
HIV antibody ကို အလျှင်အမြန် စစ်ဆေးပေးတဲ့ ကိရိယာ (Rapid HIV test) ကို အလွယ်တကူ ရနိုင်တယ်။ အခြား စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ စမ်းသပ်နည်းတွေကတော့ ELISA, Western Blot နည်းတွေ ဖြစ်တယ်။ ပိုးဝင် ပြီးချိန်က HIV antibody စစ်ဆေး တွေ့ရှိချိန်ထိ ကာလကို Window period လို့ ခေါ်တယ်။ ဒီကာလမှာ HIV ကူးစက်ခံရမှန်း မသိနိုင်တဲ့အချိန် ဖြစ်ပြီး အခြားသူတွေကိုတော့ ကူးစက်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်။ ၉၉% သော HIV ကူးစက် ခံရသူများဟာ ၃ လ အကြာမှာ HIV antibody စစ်ဆေး တွေ့ရှိနိုင်တယ်။
ရောဂါပိုး ၀င်ခါစမှာ သွေးစစ်ရင် ချက်ချင်း မပေါ်ဘူး။ HIV antibody test ကို စစ်ရင် လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) လ မတိုင်ခင်က အခြေအနေကိုပဲ ပြတယ်။ အမျိုးသား နဲ့ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင် မပြုမီမှာလဲပဲ နှစ်ယောက်လုံးက သွေးစစ် သင့်ကြတယ်။
HIV/AIDS ရောဂါ အကောင်း-အဆိုး သိချင်ရင် စမ်းသပ်တဲ့ နည်းတခုကို CD4 (Cluster of differentiation 4) လို့ ခေါ်တယ်။ အလွယ်ခေါ် T4 count; T-helper cells; T-suppressor cells; Cytotoxic T-cells နဲ့ တရားဝင် အခေါ်က CD4 lymphocyte count; CD8 lymphocyte count; CD4/CD8 ratio; CD4 percent ဖြစ်တယ်။
လူတိုင်းမှာ ခုခံနိုင်စွမ်း ရှိအောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ (ဆဲလ်) တွေ အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာ Lymphocyte ခေါ်တဲ့ သွေးဖြူဥတမျိုး ပါတယ်။ HIV ပိုးဝင်လာရင် T-cells ကို တိုက်ခိုက်တယ်။ CD4 က T cells ထဲကို HIV-1 ၀င်လာစေဘို့ “ဧည့်ကြို” တာဝန် ယူသလို ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ (ဆဲလ်) တွေကို အသုံးချပြီး၊ ပုံတူပွါးတာမို့ ခုခံအားစနစ်ကို ဖျက်ဆီးရာ ရောက်စေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ (ဆဲလ်) တွေ နည်းနေတာဟာ ခုခံစွမ်းအားတွေ ကျဆင်းတယ်လို့ သွယ်ဝှိုက်ပြီး ပြောတယ်။
ရောဂါ ဖြစ်စပိုင်းမှာတော့ လူဟာ ပျက်စီး-ပြောင်းသွားတဲ့ CD4 cells ကို အစားထိုး ပေးနိုင်သေးတယ်။ နောက်ပိုင်းကြ ဒီလို မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ CD4 cells တွေ နည်းလာလေလေ ခုခံအားကျလေဘဲ။ နောက်ဆုံး ဘာဆိုဘာမှ မခုခံနိုင်တော့ပါ။
CD4 Count ကို တခါထဲ စမ်းရတာ မဟုတ်ပါ။ နောက်စမ်းရင် အဖြေ မတူတာတွေ ထွက်မယ်။ ယှဉ်ကြည့်ရတယ်။ တယောက်ထဲမှာတောင် မနက်ခင်းမှာ ညနေထက် နည်းတတ်တယ်။ HIV မဟုတ်ဘဲ နူမိုးနီးယား၊ ရေယုံ၊ တုပ်ကွေးတို့လို ရောဂါ တခုခု ရနေရင်လည်း CD4 count ခဏတဖြုတ် နည်းတယ်။ ကင်ဆာဆေး သောက်နေရရင်လည်း နည်းတယ်။
ပုံမှန် CD4 counts 500-1500/mm3 အတွင်းရှိတယ်။ ဓါတ်ခွဲခမ်း တခုနှင့်တခု မတူပါ။ 500-1200 x 106/L လို့ သတ်မှတ်တာလဲ ရှိတယ်။ CD4 Count 200 cells/mm3 ရှိတာတွေ့ရင် AIDS ရောဂါသည်လို့ ပြောတယ်။ ARV ဆေးကို တချို့ ဆေးရုံတွေက 350 cells/mm3 ရှိကတည်းက ရောဂါလက္ခဏာ ရှိရှိ-မရှိရှိ ဆေးပေးတယ်။ CD4 နည်းပေမဲ့ ကျန်းမာနေသူလဲ ရှိတယ်။ မနည်းပေမဲ့ နေမကောင်း ဖြစ်နေသူလဲ ရှိပြန်သေးတယ်။
HIV viral load test ခေါ်တဲ့ သွေးထဲမှာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေ ဘယ်လောက်ရှိနေသလဲ သိတဲ့ စမ်းသပ်မှုနဲ့ပါ တွဲမှ ရောဂါ ဆိုးလာတာ၊ ဆေးထိရောက်တာ ဆိုတာ ပိုသေခြာတယ်။ CD4 ဟာ HIV ပိုးက ဘယ်လောက် ဖျက်ဆီးထားပြီလဲ ဆိုတာကို သိစေနိုင်ပြီး၊ Viral load ကတော့ သွေးထဲမှာ HIV ပိုး ဘယ်လောက် များများ ရှိနေသလဲကို သိစေတယ်။ Viral load များနေတာ မကောင်းဘူး။ 100,000 ကျော်ရင် ဆေးကုပါ။
HIV ရှိရင် CD4 အရေအတွက် ကျဆင်းတယ်။ ARV ဆေးပေးပြီးနောက် နလံထမှာ တခါ ပြန်တက်လာတယ်။ CD4 နဲ့ Viral load (VL) ဆက်စပ်နေတာ ရှိသလို တခါတလေ အဲလို မဟုတ်တာလဲ တွေ့နေရတယ်။ ၁၀% လောက်မှာ VL ကျနေပေမဲ့ CD4 မတက်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် CD4 တုံ့ပြန်မှု မရှိတာနဲ့ ဆေးကုတာ မထိရောက်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါ။ Viral load (VL) က CD4 လောက်တော့ မတိကျပါ။
အခြေခံ အကျဆုံးအချက်ကို ပြောရရင် “ဆေးစစ်နည်းတွေဆိုတာ လူတွေလိုဘဲ Perfect မဖြစ်ကြပါ။”
လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုတိုင်း Latex condom (ကွန်ဒွမ်) ကို စနစ်တကျ သုံးခြင်းဟာ HIV ကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ တခုထဲသော အကောင်းဆုံးနည်း ဖြစ်တယ်လို့ UNAIDS, WHO, UNFPA ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ အမြင့်ဆုံး ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ အစည်းတွေက ထောက်ခံချက် ပေးထားတယ်။ ၉၈% ထိရောက်တယ်။ (ကွန်ဒွမ်) ကို ရည်ရွယ်ချက် ၂ ခုအတွက် သုံးရတယ်။
1. ကိုယ်ဝန်ရမှာကို တားဘို့နဲ့
2. HIV အပါအ၀င် STD လိင်ကတဆင့် ကူးစက်မဲ့ (ဆစ်ဖလစ်၊ ရေယုံ၊ ကလာမိုင်ဒီးယား၊ ဂနိုရီးယား၊) ရောဂါ မှန်သမျှတွေကို ကူးစက်မလာအောင် ကာကွယ်ဘို့ ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ Genital warts လိင်လမ်း ကြွက်နို့ နဲ့ Genital herpes လိင်လမ်း ရေယုံတွေကိုတော့ မကာကွယ်နိုင်ဘူး။
(ကွန်ဒွမ်) ကို သုံးတာလဲ စဉ်ဆက် မပြတ်စေရဘူး။ အသုံးပြုနည်းလဲ မှန်ရမယ်။ နည်းအမှန်ဆိုတာ ဘာလဲ။ လိင်တခါ ဆက်ဆံတိုင်း (ကွန်ဒွမ်) အသစ်ဖြစ်ရမယ်။ (ကွန်ဒွမ်) ကို (ဗဂျိုင်းနား-ပါးစပ်-စအို) နဲ့ ထိစပ်မှု မရှိသေးခင် ကျားအင်္ဂါ သန်မာတာနဲ့ စွပ်ရမယ်။ စွပ်တဲ့အခါ၊ (ကွန်ဒွမ်) ရဲ့ အရင်းကို လက်နဲ့ ကိုင်ပြီး၊ လိင်တံတခုလုံးအပေါ် ဖုံးပေးပါ၊ လေ မခိုစေအောင် ဂရုစိုက်ပါ၊ အဖျားမှာတော့ ထွက်လာမဲ့ သုတ်ရည်အတွက် နေရာ ကျန်နေပါစေ။ ဒီနေရာက လွဲရင် လိင်တံ တခုလုံးပေါ်မှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ကပ်နေအောင် ရှိပါစေ။
Latex condoms ဆိုရင် ချောဆီ မလိုပါ။ မဟုတ်ရင် Water-based lubricants ရေအခြေခံ-ချောဆီကိုသာ သုံးပါ။ K-Y Jelly က အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်။ ဆီအခြေခံ Oil-based lubricants, Petroleum jelly, Vaseline (ဗက်ဆလင်း)၊ Hand lotion, Baby oil ကအစ တခြား ဘယ်ဆီ အမျိုးအစားကိုမှ မသုံးရပါ။ Silicone lubricant က အ၀တ်အစားကို စွန်းထင်းစေတယ်။
Ejaculation သုတ်ရည် ထွက်ပြီးတာနဲ့ ကျားအင်္ဂါ နဂိုအနေ ပြန်မကျခင်မှာ (ကွန်ဒွမ်) ကို ချွတ်ပါ။ ချွတ်တဲ့အခါ အထဲက သုတ်ရည်တွေ တစက်မှ ဖိတ်မကျစေပါနဲ့။ မ-အင်္ဂါထဲ ကျွတ်ကျန် မနေစေပါနဲ့။ တယုတယ ကိုင်ပြီး ချွတ်ပါ။
ကိုယ်ဝန် မတားနိုင်တာ၊ ရောဂါ မတားနိုင်တာ ဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတာ သုတေသန ရလဒ်တွေ မတူကြပါ။ (ကွန်ဒွမ်) အမျိုးအစား၊ အရည်အသွေး၊ စွပ်နည်း-ချွတ်နည်း၊ အချိန်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် သုံးတာ ဟုတ်-မဟုတ်၊ (ကွန်ဒွမ်) မသုံးခင် ကတည်းက ရောဂါ-ကိုယ်ဝန် ရှိနေ-မနေ၊ စတာတွေပါ ထည့်စဉ်းစားရတယ်။
ခပ်ညံ့ညံ့ နိုင်ငံတွေမှာ မတော်တဲ့လူတွေ နဲ့ ခပ်ပေါပေါ ပစ္စည်းတွေသာ များတယ်။ အမေရိကားမှာ Food and Drug Administration (FDA) က အသိအမှတ်ပြုမှ ရောင်းခွင့်ရှိတယ်။ ဥရောပ မှာတော့ CE Mark ပါရတယ်။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ဆိုရင် International Organization for Standardization (ISO) အမှတ်ပါမှ စိတ်ချနိုင်တယ်။ UK မှာ ဒါမျိုးတွေ မပါပေမဲ့ Kitemark, British Standard Kite Mark BS EN 600 ဆိုရင် ကောင်းတယ်။ WHO ကလဲ ဘယ်လို စမ်းသပ်မှုတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမယ် ဆိုတာ သတ်မှတ် ပေးထားတယ်။
အပိုလုပ်ပေးထားတဲ့ အရောင်၊ အနံ့ စတာတွေက ကျန်းမာရေးအတွက် သက်ရောက်မှု မရှိပါ။ Latex condom ကို အများဆုံး သုံးတယ်။ သူနဲ့ မတည့်သူတွေက Polyurethane Condom သုံးရတယ်။ Female Condom အမျိုးသမီး သုံးလဲ ရှိတယ်။ Polyurethane နဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ ကွင်း ၂ ခုပါတယ်။ Invisible Condom မမြင်နိုင်တဲ့ (ကွန်ဒွမ်) ဆိုတာ ကနေဒါမှာ ထုတ်လုပ်ဘို့ ကြိုးစားနေတယ်။ အရည်တမျိုးကနေ Barrier gel ဖြစ်လာစေပြီး အကာကွယ် လုပ်ပေးမှာမျိုး ဖြစ်တယ်။ ရောဂါပိုးတွေကိုရော သုတ်ပိုးကိုပါ သေစေမယ်။ Spray on Condom ဆေးပန်း (ကွန်ဒွမ်) ကို ဂျာမနီမှာ စမ်းနေတယ်။ တချို့ (ကွန်ဒွမ်) တွေမှာ Spermicide သုတ်ပိုးသေဆေး ပါတယ်။ Foam ဒါမှမဟုတ် Cream အနေနဲ့ သုတ်ထား ပေးတာမျိုး။ ကိုယ်ဝန် မရမှာကို ပိုသေခြာအောင် လုပ်တာပါ။
သုံးနေရင်းနဲ့ (ကွန်ဒွမ်) ပေါက်သွားရင်
ရောဂါကာကွယ်ဘို့ သုံးသူက (ကွန်ဒွမ်) အသစ်လဲရမယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဘို့ သုံးသူဆိုရင် အရေးပေါ်တားနည်း Emergency contraceptive (EC) လုပ်ရမယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေး တခုခု သုံးနေသူတွေလဲ တကယ်လို့ ကိုယ့်အဖေါ်ရဲ့ အကြောင်း မသိရင် ရောဂါတွေ ကာကွယ်ဘို့ (ကွန်ဒွမ်) ကိုပါ သုံးရပါမယ်။ တကယ်လို့ HIV ပိုးရှိနေသူနဲ့ ဆက်ဆံနေရင်း (ကွန်ဒွမ်) ပေါက်ပြဲသွားရင် Antiviral therapy ဆေး သောက်ရပါမယ်။
လိင်လမ်းတမျိုး (ဗဂျိုင်းနား) မှာ သုံးပြီးသားကို နောက်တလမ်း (စအို) အတွက် (ကွန်ဒွမ်) အသစ်သုံးဘို့နဲ့ Group အုပ်စုလို အဆန်းအပြား ကစားကြရာမှာလဲ တယောက်အတွက် သုံးထားတာကို နောက်တယောက်အတွက် အသစ် ဖြစ်ရပါမယ်။ သုံးပြီးသားကို စွန့်ပြစ်တဲ့အခါ တစ်ရှူးနဲ့ပတ်ပြီး၊ အမှိုက်ပုံးထဲ ပြစ်ပါ။ Toilet ထဲ မပြစ်ရပါ။ Biodegradable မဟုတ်ပါ။
HIV ပိုးရှိတဲ့ သူနဲ့ အတူနေခြင်း
HIV ပိုးရှိတဲ့သူနဲ့ တအိမ်ထဲ နေရတာဟာ ပိုးမရှိသူနဲ့ နေရတာနဲ့က ဘာမှ သိပ်မထူးလှပါ။ ပုံမှန်-သာမန် ထိတွေ့မှုတွေ ကြောင့်တော့ ဒီရောဂါပိုး ကူးတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းကာရောတော့ မဟုတ်ပါ။
• အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်တွေ၊ ခြင်၊ ယင်၊ ပိုးဟပ်၊ ကြမ်းပိုးတွေကနေတဆင့် မကူးစက်နိုင်ပါ။
• ပိုးရှိသူရဲ့ သွေးနဲ့ ထိတွေ့မိတဲ့ အရေပြားမှာ ပွန်းပဲ့တာ မရှိရင်တော့ အရေပြားကို ဖောက်ပြီး မ၀င်နိုင်ဘူး။
• Social kiss သာမန် နမ်းရုံနဲ့တော့ မကူးပါ။ Lip kiss ပါးစပ်ခြင်းနမ်းတဲ့အခါ ပါးစပ်မှာ အနာရှိနေရင်၊ သွားဖုံးသွေး ယိုနေရင်၊ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း နမ်းလို့ ပွန်းပဲ့ပြီး သွေးထွက်လာရင် ကူးစက် နိုင်တယ်။
• ဒဏ်ရာ အနာတရ၊ ပွန်းပဲ့နာမျိုးရှိနေသူမှာ အဲဒီနေရာကို ရောဂါပိုးရှိသူရဲ့ သွေးနဲ့ ထိတွေ့မိရင် ကူးစက်နိုင်တယ်။
• ရောဂါရှိတဲ့ လူမမာကို ပြုစုတဲ့အခါ လူနာရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ထွက်တဲ့ အရည်တွေ (ဥပမာ အနာက ထွက်တဲ့ အရည်၊ ချွဲ၊ သလိပ်) တွေထဲမှာ ရောဂါပိုး အနည်းအကျဉ်း ပါနိုင်လို့ ကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာ လက်အိတ်နဲ့ ကိုင်တွယ်ပါ။ ပြီးရင်လဲ လက်ကို ချက်ချင်း ဆေးပါ။
• ဒဏ်ရာတွေ အနာတွေ ရှိရင် လုံအောင် ပတ်တီး စီးထားပါ။
• သွားတိုက်တံ၊ လက်သည်းညှပ်၊ နဲ့ မုတ်ဆိတ်ရိတ် ကိရိယာတွေကို မျှပြီး မသုံးပါနဲ့။
• ဆေးထိုးအပ်တွေကို ဖြုတ်ခြင်း တပ်ခြင်း မပြုလုပ်နဲ့။ အပ်တွေကို ကလေးရှိရာ နေရာတွေမှာ မထားပါနဲ့။
HIV positive ကိုယ်ဝန်ဆောင်
HIV ပိုးရှိနေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်ကနေ မွေးလာမဲ့ ကလေးကို ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း ၁၅-၃၀% ရှိတယ်။ ကူးနိုင်တဲ့ နည်းတွေက -
(၂) မွေးဖွါးဖြစ်စဉ် ဖြစ်နေတုံး (၁၀-၂၀%) နဲ့
(၃) နို့တိုက်နေတုံး (၁၀-၁၅% ထပ်ဆောင်းတယ်) ကနေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံး အချင်းကနေ သန္ဓေသားဆီ များသောအားဖြင့် မရောက်ပါ။ မိခင်က ကျန်းမာရေး ကောင်းနေရင် အချင်းက အကာကွယ် ပေးရာတောင် ကျသေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် (၁) မိခင်လောင်းက အစာအာဟာရ ကောင်းကောင်း စားဘို့ လိုတယ်။ (၂) တခြားရောဂါ (ငှက်ဖျား၊ တီဘီ၊ ဆီးအောင့်၊) မ၀င်အောင် ဂရုစိုက်ရမယ်။ (၃) မိခင်က HIV ဆေးကုနေရင် ကလေးကို ကူးစရာအခွင့်အလမ်း ၂% သာရှိလို့ ဆေးကုပါ။
ဒီလိုဖြစ်တဲ့ သား-အမိကို ချက်ချင်း ဆေးကုရမယ်။ ARV (Nevirapine or Zidovudine) ဆေးပေးရမယ်။ Nevirapine ဆေးကို မွေးဖွါးနေတဲ့မိခင်ကို တလုံး၊ ကလေးကို ၇၂ နာရီအတွင်း ၁ လုံးပေးရမယ်။ Zidovudine ဆေးကို ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေတုံး မမွေးခင် ၆ လမှာ ပေးထားရင် ကူးစက်တာ နည်းစေတယ်။
အမေရိကားမှာ ဒီဆေးကို စသုံးခဲ့ပြီး၊ အခု တခြားဆေးနဲ့ တွဲပေးနေတယ်။ ဆေးကို ကိုယ်ဝန် ၃ လနောက်ပိုင်းမှာ ပေးတယ်။ ဘာအကာအကွယ်မှ လုပ်မထားရင် ကလေးဖွါးနေတုံးမှာ မိခင်ကနေ ကလေးကူးဘို့ ၁၀-၂၀% ရှိတယ်။ သွေးနဲ့ ရေမြွှာရည်နဲ့ ထိရင် ကူးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရေမြွှာအိတ်ကို စောပြီးဖေါက် မွေးမပေးရဘူး။ Episiotomy မွေးလမ်းချဲ့ မွေးတာလည်း ရှောင်ရမယ်။ LSCS ခွဲမွေးနည်းက ကူးစရာလမ်း နည်းစေတယ်။
ပိုးရှိမိခင်က နို့တိုက်လို့ ကလေးကူးရတာ ၁၅% ရှိတယ်။ နို့စောစော ဖြတ်သင့်တယ်။ နို့မတိုက်လေ ကူးဘို့အခွင့် နည်းလေ။ မကြာသေးခင်ကဘဲ HIV ပိုးရှိသူ မိခင်တွေက နို့တိုက်တာကို WHO က တားမြစ် လိုက်တယ်။ မအေကို ဆေးကုသမှု ခံဘို့နဲ့ ကလေးမှာ ရောဂါပိုး ရှိ-မရှိ စောနိုင်သမျှ စောပြီး (၆ ပတ်အတွင်း) ဆေးစစ်ဘို့ပါ အကြံပြုတယ်။ ကလေးက ရောဂါပိုးရှိလို့ စောစော ဆေးမကုရင် ၂ နှစ်ထက် အသက် မရှည်ဘူး။
ကလေးတွေမှာ အများအားဖြင့် အသက် ၈ လခန့်မှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပေါ်လာ တတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မွေးပြီး မကြာခင် စပေါ် နိုင်တယ်။ လက္ခဏာတွေက -
• ကလေးကြီးထွားမှု မရှိခြင်း၊ ကြီးထွားမှု နှေးကွေးမယ်၊
• အသည်း၊ ဘေလုံး၊ အကျိတ်များ ကြီးထွားနေမယ်၊
• မကြာခဏ ဖျားခြင်း၊ ကူးစက်ရောဂါများ ခံစားရခြင်းစတဲ့ လက္ခဏာတွေ တွေ့ရတတ်တယ်။
သံမဏိ စည်းမျဉ်း ၅ ချက်
1. အခြေအနေမှန်ကို ရှင်းရှင်း သိနေကြအောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပါ။ စိုးရိမ်တာ ရှိသမျှ ထုတ်ပြောပါ။ တယောက် အပေါ် တယောက် ရိုးသားပါ။ ကိုယ်ထင်တာကို တရားသူကြီးလုပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် မချပါနဲ့။
2. အကြောက် မလွန်ပါနဲ့။ မီးဖိုနဲ့ အိမ်သာ အတူသုံးရတာနဲ့ ပိုးက ကိုယ့်ဆီ ကူးမလာနိုင်ပါ။ အတူနေလေ့ရှိကြတဲ့ ညီအကိုလို၊ မောင်နှမလို၊ သားအမိ-သားအဖလို၊ အခန်းကို (ရှယ်) လုပ်နေလေ့ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းလို နေကြတာက စိုးရိမ်စရာ နတ္ထိပါ။
3. HIV အကြောင်း ကျန်းမာရေး-လူမှုရေး သုတတော့ လေ့လာထားကြပါ။ တိတိပပ ပြောပါ့မယ်၊ “သွေး၊ မိခင်နို့၊ ကျား-သုတ်ရည်၊ မ-ဗဂျိုင်းနားက အရည်၊ ” ဤလေးမည်ကနေသာ ကူးပါတယ်။ လက်ခြင်းထိ၊ ပါးခြင်းအပ်၊ ကျောခြင်း ကပ်ယုံနဲ့ လုံးဝမကူးပါ။ သွားထိလို့ ဓါတ်လိုက်မှာလား ကြောက်စရာ မထားပါနဲ့။ စာအတူ ဖတ်ပါ၊ တီဗွီအတူ ထိုင်ကြည့်ပါ။ ထမင်း တစားပွဲထဲ ထိုင်စားပါ။ ညောင်းလို့ နှိပ်နင်းပေးလဲ ရောဂါ မရပါ၊ ကုသိုလ်သာ ရပါမယ်။
4. သူ့ အတွင်းရေး-လုံခြုံမှုကို လေးစားပါ။ တစိမ်းတရံတွေကို “သူကရောဂါသည်” လို့ မလိုအပ်ဘဲနဲ့၊ နှိမ်ချင်တဲ့ သဘောနဲ့ မပြောပါနဲ့။
5. စည်းကမ်း-ကလနား သတ်မှတ်ထားပါ။ ကိုယ့်ပစ္စည်း လာသုံးတာကို အပြတ်ငြင်းပါ၊ အားမနာပါနဲ့။ ဆောရီး လောက်နဲ့ မရပါ။ ပိုးရှိသူကနေ ချတဲ့ စည်းကမ်းကိုလည်း တခြားလူတွေက လိုက်နာကြပါ။
ဒီလိုရောဂါအတွက် အင်မတန် စိတ်ထားမြင့်တဲ့ “ဆိုရှယ်-၀ပ်ကားစ်” တွေ ဖြစ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေမှ မဟုတ်ပါ၊ နိုင်ငံလှည့်ပြီး၊ ကမ္ဘာလှည့်ပြီး၊ ရောဂါကာကွယ်ရေး အသိပေးသူတွေ မနည်းပါ။
ကလေးများတွင် ဖြစ်သော ရင်ကျပ်ရောဂါ
မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားမှာ ရင်ကျပ်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော်အတန်ပြည့်စုံတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးပါမယ်။ Blog Post အနေနဲ့တော့ များပြားလှတဲ့အတွက် ခေါင်းစဉ်တွေ ခွဲပြီး တင်ဆက်သွားပါမယ်။ တချို့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ ဆေးပညာအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ပဲ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အကယ်၍ သိချင်ပါက ကျွန်တော့် mail ဖြစ်တဲ့ ziwakka23@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ CBox မှာ ကလေး ရင်ကျပ်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးထားတာတွေ့လို့ အဲဒီကပဲ စလိုက်ပါတယ်။
ရင်ကျပ်တယ်ဆိုတာဟာ နာတာရှည် လေပြွန်တွေ ရောက်ရမ်းတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ရောင်ရမ်းတဲ့နေရာမှာ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ရောင်ရမ်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ ဆဲလ်တွေ က အဓိက ပါဝင်လှုပ်ရှားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ကာလကြာရှည် ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ လေပြွန်များရဲ့ လိုတာထက်ပိုပြီး တုံ့ပြန်မှုနဲ့ တွဲဖြစ်တတ်ပြီး ရင်ကြပ်ခြင်း၊ အသက်ရှုမ၀ခြင်း၊ ညဘက်နှင့် နံနက်စောစောတွင် ချောင်းဆိုးခြင်း တို့ကို ခဏခဏဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒီလို လက္ခဏာတွေ ပြလာပြီးဆိုရင် အဆုပ်အတွင်းသို့ လေကောင်းစွာ ၀င်လို့မရတော့ဘဲ တခါတရံတွင် သူ့ဘာသာသူ ပျောက်သွားတတ်သလို တခါတခါတွင်လည်း ကုသမှုပေးမှ ပျောက်ကင်းသွားတတ်သည်။
ရင်ကျပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေ များစွာရှိပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ Theory တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။
ခဏခဏအသက်ရှူကျပ်ခြင်းနှင့် အသက်ရှူလျှင် တရွှီရွှီ မြည်ခြင်း
ရင်ကျပ်လာပါက အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ လေပြွန်များသည် ကျဉ်းသွားသည်။ ထို့နောက် အချွဲများ သလိပ်များကို အများကြီးထွက်စေသည်။ ရှူသွင်းလိုက်သော လေသည် ထိုသို့ ကျဉ်းသွားသော လေပြွန်များကို ဖြတ်သန်းရသောကြောင့် ရှူလိုက်တိုင်း ရွှဲ ကနဲ မြည်လေသည်။ ကျဉ်းနေသော လေပြွန်များကြောင့် အဆုပ်သည် oxygen ကောင်းစွာမရတော့ချေ။ ထို့ကြောင့် လူသည် မောလာသည်။ အသက်ရှူခက်လာသည်။ ထိုသို့ လေပြွန်ကျဉ်းနေသည်ကို သက်သာအောင် မလုပ်ပေးနိုင်ပါက အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ရင်ကျပ်ရောဂါသည် ညဘက်နှင့် အေးသည့် ရာသီဥတုများတွင် ထဖေါက်တတ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လေပြွန်များသည် အေးသောလေများ ၀င်လာပါက အလိုလို ကျဉ်းသွားတတ်သောကြောင့် နဂိုကတည်းက ရင်ကျပ်အခံရှိသူများတွင် ပိုမို ဆိုးသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ရင်ကျပ်စေသော လက်သည်ရှိခြင်း၊ ဥပမာ - ဖုန်မှုန့်၊ မီးခိုး၊ ပြင်းပြသော အနံ့များ
ရင်ကျပ်တယ်ဆိုတာက ဓာတ်မတည့်မှုတစ်မျိုးပါပဲ။ ခံစားရတဲ့သူအများစုမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုခု ရှိစမြဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့က စူးရှတဲ့အနံ့တွေကို ရှူမိရင် ကျပ်တတ်တယ်။ အချို့က အစားမှားရင် ကျပ်တတ်တယ်။ အချို့က ဖုန်တွေ၊ ဆေးလိပ်ငွေ့တွေ ရှူမိရင် ကျပ်တတ်တယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကျပ်ရတဲ့အကြောင်းချင်းမတူတတ်ကြပါဘူး။
အဖေအမေ နှင့် မောင်နှမသားချင်းများတွင် ရပ်ကြပ်ရှိခြင်း
ရင်ကျပ်ခြင်းဟာ မျိုးရိုးလည်း လိုက်တတ်ပါတယ်။ အမေ့ဆီမှာရှိရင် သားသမီးတွေဆီမှာပါ ရှိတတ်တယ်။ ရောဂါပြင်းတာ ပျော့တာတော့ ကွာပါတယ်။
ရာသီဥတုကို လိုက်ပြီး လေထုထဲတွင် ပါဝင်သည့် ရေငွေ့နှင့် ဖုန်မှုန့်များ၊ ပန်းဝတ်မှုန်များ ပါဝင်မှု ကွာခြားပါသည်။ ဝေဒနာသည်အများစုသည် ဆောင်းတွင်ကာလတွင် ရောဂါဖောက်တတ်ကြသည်။
လေပြွန်ကို ကျယ်စေသော ဆေးများပေးလိုက်ပါက ချက်ချင်းသက်သာခြင်း
ရင်ကျပ်ခြင်းသည် လေပြွန်များ ကျဉ်းသွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သောကြောင့် လေပြွန်ကို ကျယ်စေသော ဆေးများ ရှူလိုက်၊သောက်လိုက်၊ ထိုးလိုက်ပါက သက်သာသွားပါသည်။ များသောအားဖြင့် ချက်ချင်းသက်သာတတ်သည်။ ဤအချက်သည် အဆုပ်ပွရောဂါနှင့် ကွာသောအချက်ဖြစ်သည်။ အဆုပ်ပွရောဂါသည်များသည် များသောအားဖြင့် ရင်ကျပ်ဝေဒနာသည်များလောက် သက်သာတာ မမြန်လှပါ။ ရင်ကျပ်သမားများကမူ လေပြွန်ကျယ်ဆေးများ ရှူလိုက်ပါက ချက်ချင်းသက်သာတတ်ကြသည်။ သို့သော် ရောဂါအရမ်းရင့်လာသောအခါတွင်မူ ထိုရောဂါနှစ်ခုသည် လက္ခဏာများဆင်သွားတတ်ကြသည်။
အခြားသော ဓာတ်မတည့်သည့် ရောဂါတစ်ခုခုရှိခြင်း၊ ဥပမာ - နှင်းခူ၊ ဓာတ်မတည့်သောကြောင့် နှာစေးခြင်း
ဓာတ်မတည့်ခြင်းဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်ရှိသော ခုခံအားစနစ်၏ ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အခြားသော ဓာတ်မတည့်သည့် ရောဂါများပါ တွဲဖြစ်တတ်သည်။
ရင်ဘက်သည် မို့မောက်ပြီး အဆုပ်အတွင်းတွင် လေများပြည့်နေခြင်း နှင့် အခြားသော ရင်ဘက်အရိုးများ မူမမှန်ဖြစ်ခြင်း
ကလေးငယ်များ၏ အရိုးများသည် ပျော့ပျောင်းသေးသည်။ ပုံသွင်းယူလို့ရသေးသည်။ ရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်ပွားသော ကလေးများတွင် ရောဂါကို သေသေချာချာ control ရအောင် မကုသပါက တချိန်လုံးရောဂါဖောက်နေတတ်သည်။ လေပြွန်များသည် အမြဲတမ်းကျဉ်းနေရသောကြောင့် အသက်ရှူသွင်းချိန်တွင်လည်း လေကောင်းစွာ မ၀င်သလို အဆုပ်အတွင်းရှိ လေများသည်လည်း အပြင်ကို ပြန်မထွက်နိုင်တော့ပေ။ အဆုပ်အတွင်း၌ လေများခိုအောင်းနေသောကြောင့် ရင်ဘတ်သည် ဖောင်းနေတတ်သည်။ ကာလကြာရှည်ဖြစ်လာသောအခါ ရင်ဘတ်ရှိ အရိုးများပါ ဖောင်းလာပြီး ခိုငှက်၏ ရင်ဘတ်ကဲ့သို့ မို့မောက်လာသည်။
အသက်ရှူထုတ်လိုက်သောအခါ rhonchi ဟုခေါ်သည့် အသံကို ရင်ဘက်အနံ့တွင် ကြားရခြင်း (နားကြပ်ဖြင့်)
ရင်ကြပ်ရှိသောကလေးတစ်ယောက် ရုတ်တရက်ရင်ကြပ်ထဖောက်လာသည့် လက္ခဏာများ
အသက်ရှူလိုက်သောအခါ လည်ပင်းရှိ ကြွက်သားများ (accessory muscles of respiration) တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေခြင်း
အသက်အန္တာရာယ်ရှိနိုင်သော ရင်ကြပ်ခြင်း၏ လက္ခဏာများ
အသက်ရှူသောအခါ ရင်ဘက်သည် မလှုပ်သလောက်ဖြစ်သွားခြင်း
ကယောင်ကတမ်းပြောခြင်း၊ ဂျီကျခြင်းနှင့် သတိမကောင်းခြင်း
ကလေးတစ်ယောက်ရင်ကြပ်ရှိမရှိ ရောဂါအမည်တပ်တဲ့နေရာမှာ ရောဂါလက္ခဏာများကို ကြည့်၍ တပ်ခြင်းကသာ အဓိကဖြစ်ပါသည်။ ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ သွေးစစ်ခြင်းများက ရောဂါဘယ်လောက်ဆိုးမဆိုးကို သိလို၍သာဖြစ်သည်။ ရောဂါအမည်တပ်ဖို့ မဟုတ်ပါ။
အဆုပ်ပွခြင်း(Emphysema) နှင့် လေပြွန်များဖွံ့ဖြိုးမှုမမှန်ခြင်း(Airway Remodelling)
အဆုပ်ကိုဖုံးအပ်ထားသည့် အမြှေးပါး ပေါက်သွားပြီး ရင်ဘက်နှင့် အဆုပ်အမြှေးပါးကြားတွင် လေ၀င်ခြင်း(အရပ်အခေါ် - အဆုပ်ထဲလေ၀င်ခြင်း)
အသက်ရှူစနစ်အားနည်းပြီး အလုပ်မဖြစ်တော့ခြင်း (Respiratory Failure)
ကလေး၏ ကြီးထွားမှု နှေးကွေးသွားခြင်း(Growth Retardation)
ကလေးတစ်ယောက် ခဏခဏရင်ကြပ်သကဲ့သို့ အသက်ရှူကြပ်နေပါက ဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေများ (Differential Diagnosis)
ရင်ဘက်ကို ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း (နောက်ဆက်တွဲဝင်လာသော ရောဂါအခြေအနေများကို သိစေရန်ဖြစ်သည်)
allergy ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း - Eosinophil count, IgE, Skin tests
အဆုပ်ကောင်းမကောင်း စစ်ဆေးခြင်း (အသက် ၆ နှစ်အထက်ကလေးများတွင် ပြုလုပ်သည်)
FEV1 - reduced
FVC - reduced
FEV1/ FVC - reduced
ရုတ်တရက် ရင်ကြပ်လာပါက ကုသပုံ
High flow O2(5L/min)
if not improved, refer to ICU
အသက်အန္တာရာယ်ရှိနိုင်သော လက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာပါက ကုသပုံ
Reassess for progress
ရေရှည်အတွက် သိသင့်သောအချက်များ (Long Term Management)
ကလေးများတွင် ရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်ပွားပါက အများစုသည် လူပျိုအပျိုဖော်ဝင်စ အရွယ်တွင် သူ့အလိုလို ပျောက်ကင်းသွားတတ်သည်။ အချို့တွင်မူ နာတာရှည် ရင်ကျပ်ရောဂါအဖြစ် လူကြီးဘ၀အထိ ပါသွားတတ်သည်။ ရင်ကျပ်ရောဂါသည် ဆေးသောက်ရုံ ဆေးရှူရုံဖြင့် ပျောက်ကင်းအောင် မကုသနိုင်သေးပါ။ ဆေးသောက်တယ် ဆေးရှူတယ်ဆိုတာက ရောဂါဆိုးမလာအောင် ခဏခဏမဖောက်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ကလေးသည် ပုံမှန်အတိုင်း အခြားကလေးများနည်းတူ ကြီးထွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရင်ကျပ်ရောဂါကို သောက်ဆေးဖြင့် ရောဂါမထအောင် ကာကွယ်သည့်နေရာ၌ ဆေးများကို တမျိုးခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ တွဲဖက်၍သော်လည်းကောင်း ပေးရသည်။ နောက်ပြီး ပမာဏအနည်းဆုံးမှ စပြီးပေးရသည်။ ကလေးကို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ မခံစားရစေရန်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိပေးနေသည့် ဆေးဖြင့်မသက်သာမှသာ ဆေးပမာဏကို တိုးတန်တိုး အခြားဆေးဖြင့် တွဲဖက်၍ ပေးတန်ပေးရပါသည်။ လူကြီး ရင်ကျပ်ရောဂါတွင်လည်း ဤနည်းအတိုင်း ကုရပါသည်။ အလွန်ရှုပ်ထွေးသော ကုသမှုတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ငွေကြေးတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီး ဆေးဆိုင်များ ကွမ်းယာဆိုင်များမှ စပ်ပေးသော ဆေးများကို သောက်ပါက အနာတခြား ဆေးတခြားဖြစ်ပြီး ကုသမှုသည် မထိရောက်ဘဲ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ မြန်မာများတွင် ရင်ကျပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းနေသည့် ယူဆချက်တစ်မျိုးလည်းရှိသေးသည်။ ရင်ကျပ်ရောဂါကို သက်သာစေရန် ရူဆေး၊ သောက်ဆေးနှင့် ထိုးဆေးများရှိသည်။ အချို့သော သူများက ရူဆေးရူပါက စွဲသွားတတ်သည်။ ဆေးကလည်း အရမ်းပြင်းသည် စသည်ဖြင့် ပြောကြသည်။ အမှန်တော့ Inhaler လို့ ခေါ်တဲ့ ရူဆေးတွေဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး အမြန်ဆုံးသက်သာစေတဲ့ ဆေးဝါးများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အထက်ပါ ယူဆချက်များ မှားယွင်းပါတယ်။
Handbook for undergraduate Paediatrics, Dept of Child Health, University of Medicine, Myanmar
Labels: Asthma, Lungs, Paediatrics
သင့်တင့်သော လူနေမှုပုံစံဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းကို ၂၃ % လျှော့ချနိုင်
ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံ(LifeStyle) နေထိုင်ခြင်းဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို ၂၃% အထိ ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ(Denmark) မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သုတေသန စာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဆိုပါဆောင်းပါးကို အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက် ၂၀၁၀ ရက်စွဲနဲ့ BMJ(British Medical Journal) မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
"ပြည်သူတွေဟာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေကို သေသေချာချာ လိုက်နာဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ မကြီးမားလှတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ကျန်းမာရေးရလဒ်ကောင်းတွေကို ယူဆောင်ပေးနိုင်ကြောင်း ကို လက်ရှိ ရလဒ်များက ညွှန်းဆိုနေပါတယ်" လို့ သုတေသနမှာ ပါဝင်တဲ့ သုတေသီတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
သုတေသနာမှာ နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းပုံစံတွေကို အသက် ၅၀ နဲ့ ၆၄ ကြားမှာရှိတဲ့ ပြည်သူ ၅၇,၀၅၃ ကို ဖြည့်စွက်ခိုင်းပါတယ်။ ကင်ဆာမျိုးရိုးရှိသူတွေ၊ ကာလကြာရှည် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ သောက်သုံးနေသူတွေနဲ့ ဟော်မုန်းအစားထိုးဆေးတွေ သောက်သုံးနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ မပါဝင်ပါဘူး။ သုတေသနအဖွဲ့ဟာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့ ကမ္ဘာ့ကင်ဆာရန်ပုံငွေအဖွဲ့များကနေ ထုတ်ပြန်ထားကြတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံ စံညွှန်းကိန်းများကို Denmark မှာ အသုံးပြုတဲ့ Nordic Nutrition Recommendation နဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး စံညွှန်းတစ်ခု ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါစံညွှန်းဖြင့် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စံညွှန်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အချက်တွေကတော့
follow up ကို ၁၀ နှစ်ကြာမှ ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ၆၇၈ ယောက်မှာ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အမျိုးသားများတွင် အဓိကဖြစ်ပွားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားသူများအားလုံး၏ ၂၃ % တို့သည် သတ်မှတ်ထားသော စံညွှန်းများကို မလိုက်နာသည်ကို တွေ့ရသည်။ "အူမကြီး ကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းသည် နေထိုင်မှုစံညွှန်းများကို လိုက်နာမှုနှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးကျသည်။ ကျန်းမာအောင် နေထိုင်လေလေ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု လျော့နည်းလေလေဖြစ်သည်" ဟု သုတေသီများက ဆိုကြသည်။
Labels: Cancer, Gastrointestinal system
အခုတလေ မြန်မာပြည်မှာ မျက်စိနာတဲ့သူတွေ အတွေ့များနေလို့ မျက်စိနာတဲ့အကြောင်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နယ်မြို့များတွင်သာမက ရန်ကုန်မှာပါ မျက်စိနာကြသူတွေ မရှားပါဘူး။ အောက်ပါ ဆောင်းပါးဟာ မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားအတွက် ရေးထားတဲ့ စာမူဖြစ်ပါတယ်။ PHIM မှာ ဖတ်လို့ရအောင် Myanmar3 မှ Zawgyi သို့ပြောင်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စွယ်စုံကျမ်းဆောင်းပါးဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံမှန် Blog Post တစ်ခုနဲ့တော့ တူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍ အောက်ပါဆောင်းပါးမှာ မျက်စိနာခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထပ်မံဖြည့်စွက်လိုခြင်း၊ ပြင်လိုခြင်းရှိပါက အောက်ပါ Link တွင် သွားရောက် ဖတ်ရှုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
မျက်စိနာခြင်းဆိုသည်မှာ Conjunctiva ဟုခေါ်သည့် မျက်စိ၏ အပေါ်ဆုံးအလွှာ ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဆေးပညာအရ Conjunctivitis ဟုခေါ်သည်။ မျက်စိနာခြင်းသည် များသောအားဖြင့် ကူးစက်ရောဂါပိုးများကြောင့် အဖြစ်များပြီး ဓာတ်မတည့်မှုများကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ကြသည်။
ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် ဖြစ်သော မျက်စိအပေါ်ယံလွှာရောင်ရမ်းခြင်း (Allergic conjunctivitis)
ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ဖြစ်သော မျက်စိ အပေါ်ယံလွှာရောင်ရမ်းခြင်း(Bacterial conjunctivitis)
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်သော မျက်စိအပေါ်ယံလွှာရောင်ရမ်းခြင်း(Viral conjunctivitis)
ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများကြောင့် ဖြစ်သော မျက်စိအပေါ်ယံလွှာရောင်ရမ်းခြင်း (Chemical conjunctivitis)
အသက် တစ်လအောက် မွေးကင်းစကလေးများတွင်ဖြစ်သော မျက်စိအပေါ်ယံလွှာရောင်ရမ်းခြင်း(Neonatal conjunctivitis)
ရောဂါပျံ့နှံ့မှုအပေါ် မူတည်၍ အမျိုးအစားခွဲခြင်း
Blepharoconjunctivitis - မျက်စိအပေါ်ယံလွှာရောင်ရမ်းခြင်း (Conjuctivitis) နှင့် မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်း (Blepharitis)
Keratoconjunctivitis - မျက်စိအပေါ်ယံလွှာရောင်ရမ်းခြင်း (Conjuctivitis) နှင့် မျက်ကြည်လွှာရောင်ရမ်းခြင်း (Keratitis)
မျက်စိသည် နီနေခြင်း (Red eye)
မျက်စိ ခိုးလိုးခုလုဖြစ်နေခြင်း (Irritation)
မျက်စိမှ ပြည် (သို့) မျက်ရည်များကျခြင်း (Discharge)
အထက်ပါ လက္ခဏာများကို မျက်စိအပေါ်ယံလွှာရောင်ရမ်းသည့် အခြေအနေအားလုံးတွင် တွေ့ရသည်။ သို့သော် မျက်စိသူငယ်အိမ်သည် ဓာတ်မီးနှင့် ထိုးလိုက်ပါက ကောင်းစွာ တုံ့ပြန်မှုရှိရမည်ဖြစ်ပြီး မျက်စိမှုံခြင်း ၀ါးခြင်းများကို မဖြစ်စေပါ။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် မျက်စိနာပါက သူတစ်ခုတည်းဖြစ်တတ်သလို အအေးမိခြင်း၊ လည်ခေါင်းနာခြင်း တို့နှင့်လည်း တွဲဖက်၍ ဖြစ်တတ်သည်။ ၎င်း၏ လက္ခဏာများမှာ မျက်ရည်များကျခြင်းနှင့် မျက်စိယားယံခြင်း(သို့) ခိုးလိုးခုလုဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ မျက်စိတစ်ဖက်တွင် စတင်၍ဖြစ်ပွားတတ်ပြီး အခြားတစ်ဖက်သို့ လျင်မြန်စွာ ကူးစက်သွားတတ်သည်။ အဖြစ်များသော virus များမှာ adenovirus နှင့် herpes simplex(ရေယုန်) တို့ဖြစ်ကြသည်။
လူတွေ ကြားထဲတွင် အတွေ့ရများသော ပြည်ကို ဖြစ်စေသည့် ဘက်တီးရီးယားပိုးများ(common pus-producing bacteria) များကြောင့် အဖြစ်များသည်။ Chlamydiae trachomatis ပိုးကြောင့် ဖြစ်ပါက မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါဟု ခေါ်သည်။ ၎င်း၏ လက္ခဏာများမှာ အလွန်အမင်း မျက်စိယားယံခြင်းနှင့် အစိမ်းရောင် (သို့) အ၀ါရောင်ရှိသော ပြည်များ ထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုပြည်များကြောင့် မျက်ခွံများသည် ကောင်းစွာ ဖွင့်လို့မရဘဲ ကပ်နေတတ်သည်။ သို့သော် ပြည်မထွက်ခြင်းကြောင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် မဖြစ်နိုင်ဟု ပုံသေမယူဆနိုင်ပါ။ မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါတွင် မျက်လုံးက သိပ်ပြီးမနီဘဲ ပြည်မထွက်သည့်အခါများလည်း ရှိသည်။ အခြားလက္ခဏာတစ်ခုမှာ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်တွင် အရေပြားများ ခြောက်သွေ့ကာ အဖတ်များအဖြစ် ကွာခြင်း (severe crusting) ဖြစ်သည်။ မျက်လုံးအတွင်း ပြည်များစုလာပါက ခိုးလိုးခုလုဖြစ်ကာ ပြင်ပမှ အမှုန်အမွှားတစ်ခုခု မျက်စိထဲဝင်နေသည်ဟုပင် ထင်ရတတ်သည်။ ရောဂါပြင်းထန်ပါက မျက်စိက နာကျင်လာတတ်ပါသည်။ virus ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါကဲ့သို့ပင် မျက်လုံးတစ်ဖက်တွင် အရင်ဖြစ်ပြီး အခြားတစ်ဖက်သို့ ကူးသွားတတ်သည်။
အားပြင်းသည့် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ မျက်လုံးအတွင်းသို့ ၀င်သွားပါက မျက်စိအပေါ်ယံလွှာကို အရင်ဆုံးရောင်ရမ်းစေမည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းမဆို ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အက်ဆစ်ကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် အယ်ကာလီ တို့ကြောင့်ရောင်ရမ်းခြင်းတို့က အဖြစ်များသည်။ ထိုအခါမျက်စိသည် အလွန်အမင်းနာကျင်တတ်ပြီး မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့် ယားယံခြင်းများ မရှိတတ်ပေ။ မျက်စိသည် အရမ်းနီနေတတ်သည်။ အရောင်ချွတ်ဆေးများတွင် ပါဝင်သော အယ်ကာလီတစ်မျိုးဖြစ်သည့် sodium hydroxide ၀င်ပါက မျက်စိ အပေါ်ယံလွှာတစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားတတ်ပြီး မျက်စိအပေါ်ယံလွှာသည် ကြည်မနေတော့ဘဲ ဖြူသွားတတ်သည်။ ဖြူသွားပြီးနောက်တွင် အရေပြားလန်လာတတ်သည်။
ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်သော မျက်စိအပေါ်ယံလွှာရောင်ရမ်းခြင်းသည် လေထုထဲမှတဆင့် မျက်စိထဲဝင်ကာ ကူးစက်နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေရှားပါးပြီး ဖုန်ထူသော အရပ်များ၌ နွေအခါနှင့် ဆောင်းအခါတို့တွင် အဖြစ်များသည်။ ပူအိုက်ခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတုတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ အပွားလွယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အတူနေ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်မှ တဆင့် အခြားတစ်ယောက်ဆီသို့ လျှင်မြန်စွာ ကူးစက်နိုင်သည်။ ရောဂါရှင်၏ အသုံးအဆောင်များကို ကိုင်တွယ်ပြီး မျက်စိကို ပွတ်သပ်ခြင်းဖြင့်လည်း ကူးစက်နိုင်သည်။
ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း (Laboratory Investigation)
များသောအားဖြင့် မလိုတတ်ပါ။ နေရာဒေသအပေါ်မူတည်၍ ရာသီအလိုက် အဖြစ်များသောကြောင့် မျက်စဉ်းခပ်ဆေးများနှင့် သောက်ဆေးများပေးလိုက်ပါက သက်သာပျေက်ကင်းသွားတတ်ကြသည်။ သို့သော် ဆေးပေးသော်လည်း မသက်သာပါက အချိန်မနှောင်းမီ ကုသရန်အတွက် ပိုးနမူနာ ရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ မျက်စိအပေါ်ယံလွှာမှ ထွက်သော အရည်ကို sample ရယူပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ရောဂါပိုးရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။
မျက်စိနာခြင်း၏ ၆၅ % သည် ကုသမှုမခံယူဘဲ ၂-၅ ရက်အတွင်း သက်သာသွားတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပဋိဇီဝဆေးများ (Antibiotics) သည် အမြဲတမ်း မလိုအပ်ပေ။
ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါက ကုသပုံ
ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ချရန်အတွက် အေးသောရေဖြင့် ရောင်တဲ့အခြမ်းကို ဆေးပေးရမည်။ ပဋိဇီဝဆေးများ မပါဝင်သည့် မျက်စဉ်းဆေးများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ နာကျင်ပါက အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနှင့် allergy သက်သာစေရန် burmeton သို့မဟုတ် cetrizine အစရှိသော anti-histimine ဆေးများ သောက်သုံးနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်၍ မသက်သာမှသာ steroid ပါဝင်သော မျက်စဉ်းဆေးများကို သုံးရမည်ဖြစ်သည်။
ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်ပါက ကုသပုံ
ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်သော်လည်း ပဋိဇီဝ ဆေးများ ချက်ချင်းမလိုအပ်ပါ။ အလိုလို ပျောက်ကင်းသွားတတ်သည်။ ၃ရက်ခန့်စောင့်ကြည့်ပြီး မသက်သာမှသာ အဆိုပါဆေးများပေးသင့်သည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ လူနာများ၏ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေး အားနည်းမှုကြောင့် ဆရာဝန်များက မျက်စိနာတယ် ဆိုသည်နှင့် ပဋိဇီဝ ဆေးများပေးတတ်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ပါက ကုသပုံ
ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်လျှင်လည်း ပဋိဇီဝ ဆေးများမလိုအပ်ပါ။ မျက်စဉ်းဆေးဖြင့်ပင် ပျောက်ပါသည်။ သို့သော် သန့်ရှင်းရေးအားနည်းမှုကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးလည်း ထပ်ဝင်နေတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်များသည် ပဋိဇီဝ ဆေးများ ပေးတတ်ကြသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ပဋိဇီဝ ဆေးများက နိုင်သောကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ၎င်းနောက်မှ လိုက်ဝင်လာသော ဘက်တီးရီးယားပိုးများ (secondary bacterial infection) ကို သတ်ဖို့သာ ဖြစ်ပါသည်။
ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများကြောင့် ဖြစ်ပါက ကုသပုံ
ထိခိုက်သွားသော မျက်လုံးကို သန့်ရှင်းသောရေဖြင့် နိုင်နိုင်ဆေးရမည်။ အတတ်နိုင်ဆုံး သိလျှင် သိချင်းဆေးရမည်။ ဓာတုဗေဒ ဆေးရည်များဝင်ခြင်းသည် အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အခန့်မသင့်ပါက မျက်စိကန်းတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရေဆေးပြီးနောက် ဆေးရုံသို့ ချက်ချင်းသွားကာ ကုသမှုခံယူရမည်။
အသည်းသမားတို့အတွက် သင့်တင့်သော LifeStyle
အသည်းရောင် အသားဝါရောဂါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဖြစ်များတဲ့ နာတာရှည် အသည်းရောဂါတစ်ခုပါ။ ဘီပိုးဝင်တိုင်း နာတာရှည် အသည်းရောင်တဲ့အဆင့်ကို မရောက်ပေမယ့် အသည်းရောင် အသည်းခြောက်၊ အသည်းကင်ဆာဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူတွေလည်း မနည်းပါဘူး။ အသည်းရောင်အသားဝါဘီ ရောဂါဟာ သူ့ကြောင့် မသေအောင် ထိန်းသိမ်းကုသနိုင်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်လို့နေပါပြီ။ သို့သော်လည်း ဆေးကုသ ကုန်ကျစရိတ်တွေက များပြားတာကြောင့် မြန်မာပြည်သူ အများစုကတော့ လက်လှမ်းမမှီနိုင်သေးပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဆေးမကုနိုင်ရင်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ကျန်းမာအောင် နေနည်းတွေနဲ့ ဆေးသောက်သူတွေမှာ လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်များကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) အစားအသောက်။ အသည်းရောင်ဝေဒနာသည်အတွက် အထူးတလည် diet မလိုအပ်ပါဘူး။ အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အာဟာရပြည့်ဝတယ်ဆိုတာက လိုအပ်တဲ့ ကစီဓာတ်၊ အသားဓာတ်၊ အဆီဓာတ်၊ အသီးအရွက်၊ သတ္တုဓာတ်တွေကို မျှတအောင် စားသောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားမယ်ဆိုရင် ပျက်စီးသွားတဲ့ အသည်းဆဲလ်တွေကို ပြန်လည် အစားထိုးနိုင်မယ်။ လုံလောက်တဲ့ အားအင်ရမယ်။ လန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိမယ်။ ကိုယ်ခံအားကောင်းလာမယ်။ မြန်မာတွေချက်တဲ့ဟင်းတွေဟာ ဆီများတတ်တယ်။ ဆားများတတ်တယ်။ မလိုအပ်တဲ့ အမှုန့်တွေများတတ်တယ်။ အဲဒါတွေက ကြည့်လို့ပဲကောင်းတာ။ အာဟာရတန်ဖိုးမရှိဘူး။ ဒီတော့ ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာ ဆီကို အနည်းဆုံးထည့် ဆားကို အနည်းဆုံးသုံးပြီး ချက်ဖို့လိုတယ်။ တချို့ကပြောတယ်။ အဲဒီလို ဆီမပါ ဆားမပါဟင်းချက်ရင် ဘယ်စားလို့ကောင်းမှာလဲတဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ စားလို့မကောင်းပါဘူး။ လူအများစုကလည်း မကြိုက်ကြပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်လည်း လူတွေရောဂါထူပြောနေတာပါ။ မကျန်းမာကြတာပါ။ အရေးကြီးတာက လျှာကို အလိုမလိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်သုံးမှာထက်ပိုစားရင် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာမယ်။ တနည်းအားဖြင့် ၀လာမယ်ပေ့ါဗျာ။ အဆီများရင် အသည်းမ နဂိုကတည်းက မကောင်းတော့ အသည်းအဆီဖုံးတတ်တယ်။ အဲဒီကနေတဆင့် အသည်းဟာ လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးလာနိုင်ပါတယ်။ ၀ပြီး အသည်းအဆီဖုံးသူတွေဟာ ဘီပိုးအတွက် ပိုးသတ်ဆေးသောက်မယ်ဆိုရင်တောင် မ၀သူတွေထက် ဆေးကို တုံ့ပြန်အားနည်းပါတယ်။ တနည်းဆိုသော် ဆေးသိပ်ပြီး မတိုးဘူးပေါ့။ ဒါဆိုရင် သောက်ထားတဲ့ ဆေးတွေ အလဟသတ် ဖြစ်ကုန်မှာပါ။ နောက်ပြီး လိုတာထက် ပိုစားရင် ဆီးချိုဖြစ်လာပါမယ်။ ဘီပိုးကြောင့် အသည်းမကောင်းသူတွေဟာ သာမန်လူတွေထက် ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ချေ ပိုမိုများပြားပါတယ်။ အောက်ပါအစားအသောက်များကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
ဆိုးဆေးပါ အစာများ (ငါးချဉ်၊ ပုစွန်ချဉ်၊ အရောင်ဆိုး ထားသော ငရုတ်ချဉ်၊ အရောင်ဆိုးထားသော သီးနှံများ)
ဗိုက်တာမင်စီပါဝင်သော ချဉ်သည့်အစားအစာများကို အလွန်အကြူးစားခြင်း
သံဓာတ်များစွာ ပါဝင်သည့် အစိမ်းရင့်ရောင်အရွက်များ ကို အလွန်အမင်းစားခြင်း
ဗိုက်တာမင်စီဟာ လူအတွက်လိုအပ်တယ်။ အသည်းအတွက်လည်း လိုအပ်တယ်။ သို့သော် တစ်နေ့တာတွင် ၂၀၀ မီလီဂရမ်ထက် ပိုစားခြင်းဟာ အသည်းကို လိုတာထက် ပိုအလုပ်ပေးမိသလိုဖြစ်ပြီး ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းနေကြတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုပျောက်စေ ဆေးတွေဟာ ဗိုက်တာမင်စီ ၅၀၀ မီလီဂရမ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒ့ါကြောင့် မသောက်ရပါဘူး။ သံဓာတ်ဟာလည်း ဒီလိုပဲ။ အသည်းကို အနားပေးချင်ရင် သံဓာတ်ကို အများကြီး မစားဖို့လိုတယ်။ ထမင်းစားရင် အသားနဲ့ချည်းပဲ မစားသင့်သလို အရွက်နဲ့ချည်းပဲလည်း မစားသင့်ပါဘူး။ ရောဂါပျံ့တာ ပိုမြန်လာပါမယ်။
(၂) လေ့ကျင့်ခန်း။ အသည်းရောင်ဝေဒနာရှင်တွေ အတွက် ပုံမှန် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား ပြုလုပ်ခြင်းဟာ အလွန်ပင် အရေးကြီးလှပါတယ်။ ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ တစ်နေ့ကို သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းရုံလောက် လမ်းလျှောက်တာတို့၊ ရေကူးခြင်းတို့ဟာ အလွန်ကောင်းလှပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ပုံမှန် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်
ဆေးသောက်ခြင်းကြောင့် ညောင်းခြင်းညာခြင်းကို သက်သာစေသည်။
လမ်းလျှောက်မည်ဆိုပါက တစ်နေ့လျှင် မိနစ်၃၀ လောက်အထိ လျှောက်သင့်သည်။ နေ့စဉ်လျှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ချက်ချင်း နာရီဝက်ခန့် မလျှောက်နိုင်ပါက ၁၀ မိနစ်မှ စတင်လျှောက်ပြီး တဖြည်းဖြည်း တိုးသွားနိုင်သည်။ ချက်ချင်း ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားမည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် တဖြည်းဖြည်းချင်းကျလာပြီး နေလို့ကောင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: Lifestyle, Liver
သင့်တင့်သော လူနေမှုပုံစံဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွား...